Second de Sainte Thérèse - Wikipedia
Mompoera Second de Sainte Thérèse.
Second de Sainte Thérèse dia mompera Kristianina, martiry trinitera avy ao Espaina, teraka ny 24 marsa 1891 ary maty 31 jolay 1936. I Segundo de Santa Teresa no fiantsoana azy amin'ny teny espaniola.
Teraka ary avy hatrany dia nandray ny Batemy tamin'ny 24 marsa 1891 tao Barrios de Nistoso (Leôn) i Mompoera Second de Sainte Thérèse. Nandray ny akajo maharelijiozy trinitera tao Alcázar de San Juan izy tamin'ny faha 21 aprily 1907. Nalefa hanohy fianarana tany Roma, tao amin'ny Université Gregoriana (1907-1910) izy sady ninina tao amin'ny tao amin'ny Kôminôté trinitera tao San Carlino. Anisan'ireo mpianatra nahira-tsaina tokoa izy ary saika nahazo naoty nahazo naoty tsara hatrany isaky ny miatrika fanadinana ary dia toa izany hatrany mandrapahazoany ny diplaoman'ny Dôktôrat. Saika mbola hanohy fianarana hafa tao amin'ny Gregoriana ihany izy saingy nohon'ny tsy fahasalamana dia voatery niverina nody tany Espaina.
Fany mbola tany Roma o mompoera Second no nanao ny Fanoloran-tena mandrakizay ny 14 aogositra 1910 ary rahefa tafverina tany Madrid kosa izy no nohamasinina ho pretra ny faha 25 janoary 1914. Nonina sy niasa tany amin'ny couvent tao Dalmacio-Vélez (Côrdova-Arjentina) izy ny taona 1915 ka hatramin'ny 1919 ka sady nampianatra tamin'ny kôlejin'ny fikambanana trinitera no niandraikitra paroasy ihany koa. Mbola toa izany hatrany no asa nataony rahefa tafaverina tany Espaina izy: nampianatra teôlôjia tao La Rambla (1922-1923), nampianatra tamin'ny seminera zandriny tao Algorta (1923-1928), nanpianatra filôsôfia tao Villanueva del Arzobispo (1928-1931) ary tao amin'ny Santuario de la Virgen de la Cabeza (1931-1934). Anisan'ny mpanoratra ilay boky kely "El Santo Trisagio" sady nanatalenta manokana amin'ny fitendrena orgue. Na teo aza anefa izany fahaizany isan-karazany izany dia tsy mba nentiny nirehareha velively fa vao maika aza nanehoany sy nahitana taratra ny fitiavany mivavaka.
Ny Faha 31 jolay 1936 no namonoana azy niaraka tamin'ireo mompoera rahalahiny trinitera sasany toa an-dry Mompoera Prudence de la Croix Azo lozaina fa mbola tanora tokoa izy no maty martiry satria vao 45 taona monja. Mialoha ny hamonoana azy dia teny fampiheritreretana no nasetriny ireo milisy hamono azy satria hoy indrinda izy hoe: "Azo antoka ve ary inona no dikan'izany fiaraha-monina sy fanjakana mamono relijiozy ao aminy izahy!... Tsy fantatrareo angaha fa ny relijiozy dia manolon-tena hanasoa ny olombelona rehetra ary sakaizan'ireo mahantra sy ireo heverina ho mpiasa madikina!..." Tsy fiapangana tokoa no nilazany izany fa fampiheritreretana ireo izay mihevitra hametraka rafitra itantanana ny fanjakana nefa manosihosy ny zon'ny hafa ary mahavita mamono mihitsy aza ireo mpanao soa sy mahasahy miaro ny madinika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Second_de_Sainte_Thérèse&oldid=876466"
Voaova farany tamin'ny 21 Septambra 2018 amin'ny 17:14 ity pejy ity.